NgoLwesibini, nge-8 kaDisemba ngo-2020 NgoLwesibini, Februwari 2, 2021 Douglas Karr
Namhlanje i-mBlast isungule inguqulelo entsha, yasimahla yesisombululo sabo se-mPACT. I-mPACT yenzelwe ukusuka emhlabeni ukuya kunceda abasebenzisi ukuba bafumane amazwi anempembelelo kwintengiso yabo zizinto abazithethayo kwiiblogi, amanqaku akwi-Intanethi, kuTwitter, kuFacebook nakwezinye iindawo ezikwi-intanethi. Kwi-mBLAST, sikholelwa ekuphela kwendlela yokulinganisa ifuthe lelizwi kukujonga izihloko kunye namagama aphambili abhalwa lilizwi. Uninzi
Udumo nguMthunzi oMnyama weGunya
NgoLwesihlanu, Februwari 13, 2009 NgoMgqibelo, uJanuwari 8, 2011 Douglas Karr
Iindaba zizele ngamabali amangalisayo oluntu kutsha nje: UAlex Rodriguez uyavuma ukuba nee-steroids (ngokumangalisayo zikhutshiwe kwiphepha leendaba le-MLB.com le-AROD) UMichael Phelps wafota imbiza yokutshaya. Ulahlekelwe sisivumelwano esikhulu kunye neKellogg's. Nokuba u-Barack Obama ubeneeveki ezinzima, ezama ukufumana amalungu ekhabhinethi kunye nokutyhala kwiphakeji yokuvuselela ethe yathandwa ngabantu. Kukho izinto eziqhelekileyo. Ngamnye waba bantu babephezulu emhlabeni.
NgeCawa, Oktobha 12, 2008 NgoLwesine, Septemba 25, 2014 Douglas Karr
Ndibhale ngaphambili malunga nokuba ziluncedo kangakanani iZilumkiso zikaGoogle njengesicwangciso-qhinga kulawulo lwegama. Nantsi ingcebiso enkulu yokuba uqhube igunya lakho, imveliso yakho okanye inkonzo yakho kunye nokunceda ukukhuthaza indawo yakho okanye ibhlog yakho usebenzisa iimpendulo ze-LinkedIn kunye neZaziso zikaGoogle. Kwimibandela ongathanda ukwakha igunya kuyo ngaphakathi kwi-LinkedIn, yenza Isaziso sikaGoogle! Khetha "iWebhu" njengoluhlobo kwaye "njengoko isenzeka" kangaphi. Umzekelo: Ukuba ndinqwenela